Indlela Sync iPhone yakho iTunes
Ngoku, ukulungele ukuqhagamshela i-iPhone yakho kwikhompyuter yakho nakwi-iTunes. Unako ukuseta ukuvumelanisa kwansuku zonke ngaphandle kwamacingo, okubizwa ngokuba yi-iTunes Wi-Fi Sync, okanye unokuqhagamshela i-iPhone yakho kwikhompyuter yakho ngentambo yesinxibelelanisi se-USB kwaye usebenzise inqaku le-iTunes Sync. Nangona kunjalo, nokuba uceba ukusebenzisa i-iTunes Wi-Fi Sync, kufuneka uqhagamshele i-iPhone yakho kwikhompyuter yakho ngaxeshanye.
Ngethuba lokuqala uqhagamshela i-iPhone yakho kwikhompyuter yakho, i-iTunes iyavula kwaye unokuseta kwaye wenze ukuvumelanisa kwakho kokuqala okuzenzekelayo. Eli nqaku liza kuhamba kuloo misebenzi yokuqala kwaye emva koko lichaze ukuvumelanisa ngesandla. Iya kujonga nasekusekeni iikhrayitheriya zemisebenzi yokuvumelanisa yexesha elizayo.
isetyenziselwa ntoni i-vimpat
Le miyalelo ye-iTunes 11.1 (126), onokuyikhuphela simahla kwifayile ye- Iwebhusayithi yeApple . I-iTunes iyafumaneka kwiinguqulelo zombini zeMac kunye neeWindows. Cofa nokuba ufumane i-iTunes kwiWindows okanye ufumane i-iTunes kwikhonkco leMacintosh (nangona kungenakulindeleka ukuba ube neMac ngaphandle kweTunes) emva koko ucofe uKhuphele ngoku. Ukhuphelo luqala ngokuzenzekelayo. Landela imiyalelo eskrinini ukufaka iTunes kwikhompyuter yakho.
Ukuqala ukuvumelanisa i-iPhone yakho kunye nekhompyuter yakho, landela la manyathelo:
Qhagamshela i-iPhone yakho kwikhompyuter yakho ngentambo yesinxibelelanisi se-USB, usebenzisa izibuko elikwiikhompyuter yakho endaweni yelinye kwibhodi yezitshixo okanye hub (ngaphandle kokuba unehabhu enikwe amandla).
iTunes iyavula. Ukuba iTunes ayivuli, vula ngesandla.
Ukuba eli lixesha lokuqala uqhagamshela i-iPhone kwi-iTunes, uya kufuna ukukhetha ukuseta njenge-iPhone entsha. Nangona kunjalo, ukuba ukhuphelo lwe-iPod okanye i-iPad kwi-iTunes, unokubeka loo datha kwi-iPhone yakho.
Cofa uqalise kwiscreen esilandelayo. Iwindow yeSishwankathelo se-iPhone iyavela.
Xa uqhagamshelo olulandelayo, khetha i-iPhone yakho kwimenyu yezixhobo ezivelelayo- ngasekunene kwefestile.
I-gel ye-diclofenac 3%
Ukuba i-iTunes ayiyiboni i-iPhone yakho, qiniseka ukuba intambo yesinxibelelanisi se-USB ihleli ngokuqinileyo kuzo zombini i-iPhone kunye neekhompyuter zamazibuko kwaye i-iPhone yakho ivuliwe.
Ukuba i-iTunes ayikayiboni i-iPhone yakho, khetha iTunes → Ukukhetha kwi-Mac okanye Hlela → Ukukhetha kwiWindows. Cofa i icon yezixhobo phezulu kwefestile evulayo. Khetha ibhokisi esecaleni kokuthintela ii-iPods, ii-iPhones, kunye nee-iPads kwi-Syncing ngokuzenzekelayo. Cofa ku-Kulungile ukwenza useto olutsha.
Khetha enye yezi zinto zilandelayo kwiCandelo le-Backups:
ICloud: Khetha olu khetho ukusebenzisa iCloud njengendawo yakho yogcino.
Le Khompyutha: Khetha olu khetho ukuba ufuna ukugcina ugcino lwakho lwe-iPhone kwikhompyuter yakho. Unenkqutyana ye-Encrypt iPhone Backup. Chwetheza igama eligqithisiweyo kwidayalog ebonakalayo. Xa ubuyisela ukhuphelo kwi-iPhone yakho, uya kucelwa ukuba ufake ipassword.
Khetha kwezi zilandelayo kwicandelo lokukhetha:
Ukuvumelanisa ngokuzenzekelayo xa le iPhone iqhagamshelwe: Ivula ngokuzenzekelayo i-iTunes kwaye iqala ukuvumelanisa xa uqhagamshela i-iPhone yakho kwikhompyuter yakho ngentambo yesinxibelelanisi se-USB. Xa le bhokisi ingakhange ihlolwe, uvumelanisa ngesandla ngokunqakraza iqhosha leSync kwikona esezantsi ekunene.
Ukuba kuthintela ii-iPods, ii-iPhones, kunye nee-iPads ekuvumelaniseni Ngokuzenzekelayo ukhetho kwiiPaneli zezixhobo ze-iTunes Ezikhethwayo (iTunes → Ukukhetha kwi-Mac; Hlela → Ukukhetha kwi-PC) kujongiwe, olu khetho lubonakala lufiphele kwaye alufumaneki.
Vumelanisa nale iPhone ngaphezulu kweWi-Fi: I-iPhone yakho ivumelanisa ne-iTunes kube kanye ngemini xa zombini ikhompyuter yakho kunye ne-iPhone zixhunyiwe kwinethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi, kwaye i-iTunes ivulekile kwikhompyuter yakho. UApple ucebisa ukuba i-iPhone yakho iqhagamshelwe kumthombo wamandla. Nangona ungavumelanisa ngaphandle kwamandla, ityula ibhetri.
Vumelanisa kuphela iingoma kunye neevidiyo ezihloliweyo: Kuphela ziingoma kunye nevidiyo ozijongileyo ngesandla ezivumelanisiweyo. Ukuba uvumelanisa uluhlu lokudlala oluqulethe iingoma ezingakhange zihlolwe kwaye uvumelanise uluhlu lwadlalwayo, iingoma ezingakhangelwa azifakwanga kulungelelwaniso. Oku kuthetha ukuya kwilayibrari yakho iTunes kwaye ukhethe ngesandla okanye ungakhethi zonke iingoma kunye neevidiyo ozigcine kwikhompyuter yakho.
Khetha iividiyo zenkcazo esemgangathweni: Inkcazo esemgangathweni iividiyo zihlala kwimemori encinci kuneevidiyo ezichazayo, ngenxa yoko unokukhetha ukuvumelanisa iividiyo ze-SD kwi-iPhone yakho.
Guqula iingoma zenqanaba eliphezulu ziye kwi-128/192/256 kbps: iTunes ngokuzenzekelayo yenza iifayile zomsindo ezincinci ukuze ucofe umculo ongaphezulu kwi-iPhone yakho.
Lawula ngesandla umculo kunye neevidiyo: Khetha oku ukuba ufuna ukucofa kwaye utsale umculo kunye nevidiyo ukusuka kwi-iTunes ukuya kwi-iPhone yakho. Ukuba ufuna ukunciphisa umculo okanye iividiyo ezigcinwe kwi-iPhone yakho, oku kunokuba yinto efanelekileyo onokukhetha kuyo.
gpi a5 ipilisi okweqanda
Hlela kwakhona izilumkiso: Cofa eli qhosha ukuba, kwixa elidlulileyo, ubuze i-iTunes ukuba iyeke ukubonisa ukuthenga nokukhuphela izilumkiso kodwa ungathanda ukuzibona kwakhona.
Qwalasela iqhosha lokuFikelela: Cofa eli qhosha ukuvula imisebenzi eyahlukeneyo yoFikelelo kwi-Universal, njengeVoiceOver kunye ne-Speak Auto-Text.
Cofa Faka isicelo.
Ungabhala ngaphezulu kokuvumelanisa ngokuzenzekelayo kwisiseko esifunekayo ngokwazisa iTunes ngaphambi kokuba uqhagamshele i-iPhone yakho kwikhompyuter yakho. Cinezela kwaye ubambe u-Command + Option (Mac) okanye iShift + Ctrl (PC) kwaye uqhagamshele i-iPhone yakho. Bamba izitshixo de i-iPhone yakho ivele kwisiphelo esifanelekileyo sebar yokuhamba ngezantsi kwebar yesixhobo. I-iPhone yakho ayizukuvumelanisa ngokuzenzekelayo, kodwa iisetingi obuzimisile ngaphambili zihlala zingatshintshanga
Ngaba iprozac ingakwenza udinwe
iziyobisi ezikhuthaza iziyobisi
Isisombululo se-inhalation ye-sodium chloride
ide isebenze njani i-metoprolol
ungathatha ibuprofen nge-eliquis
Ungazikhusela njani kwihard drive